လှကျော်ဇော ● ဖေဖေ့မျက်ရည် | MoeMaKa Burmese News & Media
ပထမ မှတ်ချက်လေးကတော့ ….
မေမေအကြောင်း သမီးလှလှရေးသားခဲ့တဲ့ စာတမ်းများဟာ မေမေအကြောင်းအချက်တွေ စုံလင်ပြီး အစီအစဉ်တကျလည်း ဖြစ်တယ်။ အထူးသဖြင့် – စာရေးသူ သမီးလှလှမှာ မေမေအပေါ်လည်း စိတ်ထိခိုက်နေ၍ထင်သည်။ ရေးသားထားပုံမှာလည်း အလွန်ရသမြောက်နေပြီး မေမေအကြောင်းအရာအားလုံးကို သိကျွမ်းနိုင်ပေသည်။
ကျမ ဒါတွေကို ဖတ်မိရင်းက အဲဒီနေ့က (၂၀ဝ၆ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၁ ရက်နေ့) အဖြစ်အပျက်ကို သတိရနေမိပါတယ်။ အဲဒီနေ့မနက်က ကျမတို့သားအဖ မနက်စာစားအပြီး ရေဒီယိုတွေလည်း နားထောင်ပြီးချိန်မှာ ဖေဖေ့ကို ဧည့်ခန်းမှာ အဲဒီစာ အုပ်လေး ကျမက ပေးဖတ်ထားတာပါ။ ကျမက မီးဖိုထဲမှာ ချက်ပြုတ်နေမိပါတယ်။ နေ့လည် ထမင်းစားချိန်ရောက်တော့ ထမင်းဝိုင်းလည်း ပြင်ဆင်ပြီးရော ကျမက ဖေဖေ့ကို သွားခေါ်ပါတယ်။ ကဲ …. ဖေဖေ ထမင်းစားရအောင်လေလို့ ပြောပြီး ကျမက ဖေဖေကိုဆွဲထူတော့ ဖေဖေ တုန်တုန်ယင်ယင်ကြီး ဖြစ်နေပါတယ်။ ကျမလန့်ဖျတ်ပြီး ဖေဖေ့မျက်နှာ မော့ကြည့် လိုက်တော့ တမျက်နှာလုံးနီရဲနေပြီး မျက်ရည်တွေ ရွှဲနေပါတယ်။ ဟင် … ဖေဖေဘာဖြစ်လဲ။ ဘာဖြစ်လဲလို့ ကျမက မေးတော့၊ ဖေဖေက ရှက်ကိုး ရှက်ကန်းနဲ့ ပြုံးပြပြီး “ဘယ်လိုဖြစ်တယ် မသိပါဘူး သမီးရယ်၊ မေမေ့ကို သိပ်သတိရသွားလို့ပါ” တဲ့။ “သမီးရယ် စာဖတ်လို့ကောင်းလိုက်တာ၊ မေမေ့အကြောင်းကို သမီးက စာတအုပ်ဖြစ်အောင် ရေးနိုင်တယ်နော်” လို့ ကျမကို ချီးကျူးလိုက်ပါသေးတယ်။